Maxay tahay sababta Afrika ay “u joojineyso mid ka mid ah cuntooyiinka loogu jecel yahay?” | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxay tahay sababta Afrika ay “u joojineyso mid ka mid ah cuntooyiinka...
Maxay tahay sababta Afrika ay “u joojineyso mid ka mid ah cuntooyiinka loogu jecel yahay?”
Madaxweyne ku xigeenka dalka Zambia, ayaa ku baaqday in wax badan laga badelo hab cunista raashinka ay cunaan shacabka dalkaas.
Inonge Mutukwa ayaa sheegtay in dadka ay iska dhaafaan cunista soorta laga sameeyo galleyda, ayna ku baddelaan cuntooyin kale oo nafaqo leh, taas oo lamid ah in shacabka Soomaalida loogu baaqo inay iska dhaafaan cunista canjeerada.
Soorta laga sameeyo galleyda la shiida ayaa ah cunto aad looga isticmaalo qeyba badan oo kamid ah Geeska iyo Koonfurta qaaradda Afrika, waxaana daraasad la sameeyay lagu ogaaday in inta badan dalalka ka hooseeya saxaraha ay cunaan boqolkiiba 21 galleyda ka baxda caalamka.
Hadalka Madaxweyne ku xigeenka dalkaas, ayaa yimid xilli qeyba badan oo kamid ah dalkaas iyo dalalka deriska la ah ay wajahayaan roob yari iyo wax soo saarka beeraha oo hoos u dhacay, taas oo ah dhibaato inbadan soo lalaabatay, la aaminsan yahayna inay ugu wacan tahay isbadelka cimilada.
Cunista badan ee soorta ayaa la aaminsan yahay inay yareesay galleyda, taas na ay keentay in dowladda ay tiraahdo wax kale oo aad cuntaan raadsada.
Cuni yarida dalka Zambia ayaa keentay in 1.7 milyan oo qof, oo u dhiganta 18 boqolkiiba dadka ku nool dalkaas ay wajahaan cunni yari ba’an.
Si dhibaatada looga baxa, Ms Inonge waxaa ay sheegtay in dadku ay u bahan yihiin inay cunaan raashin kala duwan, gaar ahaan waxaa ay sheegtay in loo baahan yahy inay badsadaan shamuureyda, qamadiga, bataatiga iyo cuntooyinka kale eek a baxa dalkaas.
“In si tartiib ah looga maarmo cuntooyinka laga sameeyo galleyda ee aan aadka ugu tiirsanahay, waxay u wanaagsan tahay dalka, waxayna taas fursad siineysaa in dadku ay cunaan raashinka nafaqada leh,” waxaa sidaas wargeys ay dowladda leedahay u sheegay Madaxweyne ku xigeenka Zambia.
Waxay intaa ku dartay in qaabka keliya ee looga weecan karo dhibaatooyinka cunni yarida ay tahay in la raadsado cuntooyin kale oo nafaqeysan, kuwaas oo aad uga kharash yar raashinka kale.
Hasayeeshee dhaleeceyn aad u ballaaran ayay kala kulantay soo jeedintaas.
Dad badan oo ku nool dalkaas ayaa cuna soorta maalintii laba ama saddex jeer, waxaana qaar badan oo kamid ah dadkaas ay shegeen in aysan u aheynba, haddii aysan cunin soorta oo dalka Zambia looga yaqaano nshima, Malawi looga yaqaano nsima, Zimbabwe looga yaqaano papa, Koonfur Afrikan looga yaqaano pap, halka dalka Kenya na looga yaqaano Ugali.
Dadka qaar ayaa baraha bulshada ku dhaleeceeyay dowladda, iyagoona sheegay in dowladda looga fadhiyo inay wax ka qabato cunni yarida dalka ka jirta, balse aysan ku mashquulin sidii ay wax uga badeli lahayd waxa calooshooda gala.
Aragtida shacabka ee ku aadan arrintan
Image captionSoorta ayaa aad looga cuna qaaradda Afrika
Soorta ayaa ah galley la shiiday, waxaana laga isticmaala dalal badan oo soomaaliya ay kamid tahay, halkaas oo dadka ay ku cunaan caano, qudaar ama maraq.
Sababta dad badan ay u cunaan aya ah inay tahay cunto dhaqan , kuna xusheen helitaankeeda, maadama galleyda laga sameeyo iyo qiimaheeda oo aad u jaban.
Sidoo kale waxyaabaha laga sameeyo galleyda ayay dadku qamiiriyaan, kadibna ay ka sameystaan qureec, qado iyo casho.
Clifford Chirwa, oo ah ardya wax ka barta jaamcadda Zambia, ayaa shaki geliyay in dadka in dowladda ay ku guuleysan doonta in dadka ay ka reebto cunista soorta.
“Suurtagal ma ahan, sababtoo ah dhaqan walba waxaa uu leeyahay cunnooyin u gaar ah oo ay cunaan, si lamid ah sida shacabka Nigeria ay u cunaan bariiska loo yaqaano jollof,” ayuu yiri Chirwa.
Sidoo kale fikirkaas waxaa la qaba Olipa Lungu, oo maqaaxi ku leh goob aad u mashuul badan oo ku taala caasimadda Lusaka, waxayna sheegtay in qorshahaas uu guuldaresytay.
Waxay intaa raacisay in cunnooyinka kale ee ay dadka ka helaan uu kamid yahay chips, ama baradhada, balse ay sameyso marka ay dadku dalbadaan oo keliya.
Qorshaha isu dheeli tirka ee dowladda
Image captionHaweeneydan waxay maqaaxi laga cuno soorta ku leedahay caasimadda Lusaka
Hadalka ka soo yeeray Madaxweyne ku xigeenka dalkaas ayaa waxaa taageeray xisbiga talada haya ee ZNFU.
“Iyadoo isbadelka cimilada uu jiro, waa in aan raadsanaa cunnooyin kale, waxaan nahay dad aad ugu tiirsan galleyda, sidaas oo ay tahayna waxaana beeranaa dalagyada sida bariiska, qamadiga iyo kuwa kale,” sidaas waxaa BBC-da u sheegay afhayeenka xisbiga talada haya, Kakoma Kaleyi.
Kakoma ayaa sidoo kale sheegay in dalkaas ay ku yar tahay cunista raashinka kale, loona baahan yahay in taas wax laga badelo.
Dadka aqoontada u leh nafaqeynta ayaa sheegay in galleyda lagu iibiyo dukaamada ee la soo warshadeeyay aysan lahayn nafaqo badan oo uu u baahan yahay jirka dadka bani’aadamka.
Galleyda ayaa sidoo kale la sheegay inay ka nafaqo wanaagsan tahay marka ay qabto baalka, oo ay ku jiraan Vitamiinada kala ah vitamin A iyo vitamin C, balse intaas oo dhan ay meesha ka baxeyso haddii galleyda la shiido.
Previous articleXOG: Villa Soomaaliya oo go’aan ka qaadatay in ay Janan loo dhiibo Booliska Aduunka
Next articleXOG: Kenya oo joojisay dhismaha safaarad ay ka hirgelin lahayd Muqdisho [Sababta]
Maxaadan Ogeyn oo caawa kasocda magaalada Dhuusamareeb iyo warar shegaayo Nabad iyo Nolol oo…
Ciidamada ilaalada madaxweynaha Kenya oo laga mamuucay cunista jaadka
Fiqi oo ka hadlay ciidanka Madaxda D/Goboleedyada la tageen Dhuusamareeb
Qodobada loo cuksanayo xil-ka-xayuubinta Trump oo maanta la ansixinayo
SAWIRO: War Naxdin leh oo naga soo gaaray Muqdisho….
Soomaaliya Oo Qarka U Saaran Luminta Xaqa Codeynta Golaha Guud Ee Qaramada Midoobay
Sawirro:-Taliyaha Cusub Ee Ciidanka Uganda Ka Jooga Somalia Oo Xilka La Wareegay
Xildhiban Fiqi oo maanta isu bedelay weriye soo tebiyey Doorashadii Jubbaland ee Garabka Axmed Madoobe.
XOG:Farmaajo & Fahad Yaasiin oo Go’aan kale ka qaatay kulankii Madasha Xisbiyada Qaran
Soo jeedintii ahayd in Kenya laga masaafuriyo Yuusuf Xaaji iyo Aadan Barre oo muujisay xaqiiq qarsaneyd
Dagaal uu dhiig ku daatay oo goordhow ka dhacay Magaalada MUQDISHO Una dhaxeeyo…
Madaxweynaha Kenya oo qorsheynaayo in Muqdisho soo gaaro si muranka badda guul Oga gaaro
Maxoow MD Farmaajo kayiri Daahfurka Mashruuca dhismaha dekedda Hobyo iyo wafdigii Qadar